Ezi Omume na-enyere gị aka na SEO - Kwesịrị Ekwesị na-eme ihe ziri ezi
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere SEO ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya. Nke a na-ezigara SEO zichọn na ọ bụ 'ziek' nke zoro ezo nke ihe ịrịba ama nke akara ngosi na-egosi na ọ na-eme ihe nchọgharị weebụ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka Google wordt weergegeven. Ndị ọkachamara bụ ndị na-emekarị omenala - dị ka ndị ọzọ na-aga n'ihu.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ga-enyere gị aka (VA's) opmerken zoals Google Now en Siri, ị bụ? Na plaats van een zoekopdracht na een zoekmachine na voeren, ndị na-ederede na ndị ọbịa na-ekwu okwu. Na-ezute ihe dị ka 50% nke ndị nche na nke VA si, na-ekwu na ọ bụla na-ele anya na-abịa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ. Dị ka ihe atụ, Google Ugbu a na Siri zijn pụrụ iche na-eme ka ị na-aga na teknsten. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ị ga-eme, ị ga-enweta ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere VA na ị na-achọ ihe ọmụma, olee otú ị ga-esi na-eme ka ị na-enweta ihe olu omume systeem?
Alexander Peresunko, onye ọkachamara de toonaangevende Ọkachamara , akọwapụta ihe dị iche iche na-enyere ndị mmadụ aka ịghọtakwu ihe ndị ọzọ na-enyere gị aka inweta, dị ka nke SEO-prestaties.
Maak kennis zutere spraakvragen
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-agwa gị okwu - a na-enyere gị aka (VA's) worden niet gebombardeerd met vragen na je typische zoekmachine ziet. Natuurlijk zouden mensen willen weten over bedrijf, ma na-eme ka ị na-eche banyere blog. Nke a na-adabere na ya: ebe obibi, openuren, aanbiedingen, enz. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla nke ndabere..
N'ikpeazụ, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụla na-eme ka gị na saịtị gị na saịtị. Dị ka ihe atụ, Sri koppelt automatisch naar Yelp na-adresgegevens na mpaghara gị. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ịntanetị, ị ga -
Nkọwapụta nke azu
Ọ bụrụ na ị na-ezute gị na SEO na ọ bụ ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ị na-aza ajụjụ. Ị nwere ike ikwu na ọ bụla na-ekwu okwu. Nyochaa ma ọ bụrụ na ị na-ele anya na ọ bụrụ na ị na-achọ SEO, ị nwere ike na-ele anya na SEO na-achọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị na-eme ihe ọ bụla.
Họrọ onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ
Ị nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla ị chọrọ ịchọta na SEO dabeere na ọchụchọ olu. Dị ka ihe atụ, 'NYC' nchịkwa 'bụ na-egosi na vergelijking met' tennisschoenen '. Ọ bụrụ na ị na-abanye ebe a. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-agụ ihe na-egosi na nke a na-emekarị na web-based web site. Zet onwe gị na ndị ọkà mmụta sayensị.
Ebe nrụọrụ weebụ gị ga-adị n'ihu n'ọdịnihu
All marketeers hebben slapeloze nachten over het volgende Google-algoritme. Een kleine tweak kan een bedrijf sturen om de zoekresultaten na verdubbelen voor een zoekopdracht. Dị ka ihe atụ, Google bụ ndị na-agba ịnyịnya ibu na-enyere gị aka ị na-enweta ihe nchọgharị weebụ na nke kasị mma na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Lee na lus.
Virtuele na-enyere gị aka ime ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Anyị voorbereid. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ na-eme ka ọ dị mma Source .